Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Weerrardii Mumbai ee 2008
Barnaamijka Abaal-marinta Caddaalada waxay bixinaysaa abaal-marin gaaraysa ilaa $5 milyan oo doolar qofkii keena macluumaad u horseeda in kuwa mas’uulka ka ah weerarkan shaqsiyaadkan caddaaladda la horkeenno. Xubnaha muhiimka ah ee dambigan foosha xun ayaa weli la la’ yahay, oo baaritaankana waa mid firfircoon oo socda. Abaal-marinta loo bixinayo qof kasta oo mas’uul ka ahaa falkan argagixisada ah.
David Coleman Headley iyo Tahawwur Rana ayaa lagu xukumay maxkamad federaali ah oo Mareykan ah taageeridooda howl-gelinta ururka argagixisada ee LeT. Bishii Janaayo 2013, Headley, oo ah muwaadin Mareykan ah oo ka soo jeedin Pakistan, ayaa lagu xukumay 35 sano oo xabsi ah oo lagu xukumay daraasiin daraasad oo ka dhan ah argagixisannimada oo la xidhiidha doorkiisa qorshaha weerarkii argagixisannimada ee bishii Nofembar 2008 ee Mumbai, Hindiya, iyo weerarkii dambe ee la soo jeediyay wargeyskii wadanka Danmark. Waxa uu qirtay dembiga bishii Maarso 2010 in dhammaan 12 dambi ee lagu soo oogay, oo ay ka mid yihiin caawin iyo dambi gargaarid dilka lixda qof ee dhibanayaal Mareykanka ah. Headley waxaa lagu helay dambi shirqool ah inuu qarxiyo goobo dadweynaha ee Hindiya; shirqool lagu dilo laguna dhufto dadka Hindiya; lix dacwadood oo gargaar iyo abaabulaya dilka muwaadiniinta Mareykanka ee Hindiya; shirqool lagu taageerayo argagixisada Hindiya; shirqoolka dilka iyo kufsiga dadka ku nool Danmark; shirqool lagu taageerayo argagixisanimo argagixisanimo ee Danmark; iyo shirqool ay ku siiyaan taageero maadi ah ee LeT. Rana, oo ah muwaadin Canadian oo waa qof saaxiib muddo dheer la ah Headley, ayaa lagu xukumay 14 sano oo xabsi ah waxaa lagu helay inuu gacan ka geystay oo uu taageero maaddi oo argagixisanimo ee Danmark iyo in la siiyo taageero maadi ah LeT. Bishii Juun 2011, Rana waxaa lagu waayay dambi shirqool lagu taageerayo ay taageero maaddi ah u gudbiyeen ee bishii Nofembar 2008 ee weerar argaggaxiso ka dhacay Mumbai, laakiin waxaa lagu helay inuu ka qayb galay shirqool ku lug lahaa argagixisanimo oo la xidhiidha wargeyska Deenishka iyo bixinta ay taageero maaddi ah u gudbiyeen kooxda LeT.
Sidoo kale kuwa soo socda ayaa waxaa lagu soo tuhmay inay kale lagu soo eedeeyay maxkamad federaali ah oo Mareykan ah:
Sajid Mir – waxay howshiisu ahayd sidai “gacanqabte” “handler” gacan siinaay David Headley iyo kuwo kale oo uu amrayay oo uu ku socday amarrada la xiriira qorshaynta, diyaarinta, iyo fulinta weerarrada argagixisada iyaga oo matalaya LeT
Major Iqbal – oo ah qof degan wadanka Pakistan oo ka qayb qaatay qorsheynta iyo maalgelinta weerarrada ay qaadaan LeT
Abu Qaaxfa – oo qof degan wadanka Pakistan oo la xiriirta LeT oo u tababaray dadka kale farsamooyinka dagaalka si loogu isticmaalo weerarro argagixiso
Mazhar Iqbal, oo naanaystiisa la yiraahdo Abu al-Qama – oo ah qof degan Pakistan iyo mid ka mid ah abbaanduulayaasha LeT